Sicirka aan fadhin ee Sarrifka oo saameyn ku yeeshay Shacabka Muqdisho. | YoobsanNews.com
Sicirka aan fadhin ee Sarrifka oo saameyn ku yeeshay Shacabka Muqdisho.
Sicirka Sarrifka Lacagaha Qalaad ayaa Jahwareer uu ka jiray Maalmihii ka dambeeyay Doorashada Madaxweyne ee Soomaaliya.
Taasi ayaa abuurtay hadal heyn iyo saameyn weyn oo ay ku yeelatay Shacabka Muqdisho oo horay ula daala dhacayay dhibaatooyin dhaqaalo xumo iyo Sicir barar dhanka Raashiinka Khutul Daruuriga ah.
Dalka oo u muuqda mid ku biyo shubtay Isticmaalka Lacagta Dollarka Maraykanka ayaa haatan waxaa hoos u dhac uu ku yimid Sarrifka dollarka ee Shiling-ka Soomaaliga xilli Badeecooyinka nuucyadooda kala duwan eek u tiirsan Nolol maalmeedka ay qiimahoodii hore joogaan.
Hadaba Arrintaan ayaa keentay in su’aalo badan la is weydiiyo balse waxaa badi marka la isku soo xooriyo soo ifbaxeysa in ay ku biyo shubaneyso in Sarriflayaasha ay dano gaar ah ka leeyihiin maadaama Ciidamada Qalabka sida Soomaaliyeed iyo dhammaan shaqaalaha kale ee dowladda Soomaaliya warar soo baxayay sheegayeen in maalmahaan ay ku qaadanayaan xuquuqahooda mushaarka oo bilihii u dambeeyay aysan helin.
Waana midaas tan shakiga weyn dad badan gelisay ee ku aadan Sarriflayaashu in ay hunguriyeynayaan in Lacagaha dollarka faraha badan ee Mushaaraadka loo soo qaadanayo la hayaan xilli Maciishadu sideedii tahay ayna gadaal kaga dhigaan qiimihii hore wax loogu kala sarrifan jiray marka ay Lacaga dadka kale hantiyaan.
Sidaas Daraadeed mid ka mid ah Sarriflayaasha oo Warbaahinta la hadlay ayaa cadeeyay in Hoos u dhaca Sarrifka heerka uu hadda gaaray aan horay loo arkin isagoo ugu baaqay Bulshada Soomaaliyeed in ay ka feejignaadaan dhac qaawan oo looga qaadan rabo lacagahooda.
Wixii ka dambeeyay bur burkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya ayaa waxaan jirin Hay’ado Sal adag leh oo la xisaabtama Shaqsiyaad ka faa’ideysta Hadba meelaha bulshada ay uga itaal daran tahay iyagoo doonaya in si gaar ahaaneed uga bulaalaan.
Waana mid ka mid ah Aafooyinka looga fadhiyo in ay Baabi’iso Dowladda Cusub ee uu majaraha u hayo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo.
W/Q: Mohamed Ahmed Jimale.
Previous: Beesha Xawaadle oo xal u noqon doonta Damaca Beelaha kale ee Hawiye ay ku Hunguriyeynayaan Xilka Ra’iisul Wasaaraha.
Next: Akoonadii Xukuumadda iyo Dowladda Hoose ee Xamar oo la Xannibay.